Sida loo kiciyo naagta: tilmaamaha iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Ma sahlana in haweeneyda laga farxiyo, gaar ahaan tan farsamooyinka u shaqeyn kara haweeney laga yaabo inaysan u shaqeyn mid kale. Sababtoo ah ma fahmin sida haweenku uga fikiraan galmada iyo kala duwanaanshaha kacsiga ragga, qaladaad badan ayaa badanaa la sameeyaa. Rag badan ma oga sida loo kiciyo dumarka waxayna ku dambeeyaan qaladaad caadi ah.
Sidaa darteed, waxaan ku baraynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad ugu fiicnaato sariirta oo aad u barato sida loo kiciyo dumarka.
1 Aqoon Guud
2 Tabaha lagu barto sida loo kiciyo dumarka
3 Khaladaadka marka dumarka la kiciyo
4 Talooyinka qaarkood
Dumarku uma eka ragga marka laga hadlayo xagga jinsiga, in kasta oo ay sidoo kale galmoodaan, laba ilbidhiqsi gudahood kama tagayaan 0 ilaa 100. Iyaga waa inaad wakhti la qaadataa si aad u kululaatid. Waa inaad abuurtaa nooc xiisad galmo oo idinka iyo iyada u dhexeysa. Waxay ka kooban tahay nuurad iyo ciideed, taas oo ah, tallaabo yar oo horay loo qaado iyo tallaabo yar oo gadaal ah: u dhunko si qiiro leh ka dibna xoogaa gaabis ah Jiidhan dagaalka waxaad ku adkayn doontaa isaga inuu sugo wakhtiga hurdada.
Dhanka kale, marka waqtigu ku habboon yahay, waa inaad qorshaysaa inaad deegaanka u diyaariso si ay uga dhigto mid jaceyl iyo raaxo leh, u garaac muusig jilicsan, isticmaal nalalka daciifka ah oo aad u ilaaliso sawirkaaga, xirato nigis galmo leh iyo barafuun, oo aad daryeesho neeftaada. Haddii aad cashada ka hor cuntid, waxaa ugu wanaagsan inaad keento xanjo ama wax hagaajin kara neefsashadaada haddii ay dhacdo inaad fursad u weydo inaad cadaydo.
Tabaha lagu barto sida loo kiciyo dumarka
Salaaxu waa muhiim: taabashada iyada, hoos u dhigida gacmahaaga gadaasheeda, jirkaaga oo aad ku cadaydo bushimahaaga, iwm. idea Fikrad fiican ayaa ah inaad ku bilowdo duugis.
Isheeda ka fiiri: Tusaale ahaan, marka la salaaxayo ama lagu ciyaarayo timaheeda, haweenku waxay u arkaan indho qabasho mid aad u xiiso badan.
Xiiqda dhegta: Waswaasku aad ayey ugu faraxsan yihiin dumarka, waxay doortaan ereyada saxda ah oo ha ku dhicin xumaan.
Kici kintirkeeda: Haddii aad rabto inay yeelato kacsi lama iloobaan ah, waa inaad salaaxa kintirkeeda, marka hore farahaaga qoyso, ha riixin, si tartiib ah ugu rog roogaaga oo sawiro wareegyo yaryar. Markaa waad sii wadi kartaa adeegsiga luqaddaada, adigoo raacaya isla falsafadda, taas oo ah, ha u adeegsan luqaddaada si aad u adag iskuna sawir wareegyo yar-yar.
Qaado waqtigaaga: Markaad gelineyso, ugu yaraan bilowga, ku samee xawaare fudud. Dhib malahan haddii ay kaa codsato inaad dhaqso u degto, iska naso, waxay dareemi doontaa xoog iyo xamaasad badan.
Ku raaxayso: Haddii ay ogaato inaad ku raaxeysaneyso, way ku farxi doontaa inay maqasho codad wanaagsan oo adiga kaa yimid, haddii aad sidoo kale indhaha ka eegto, waxaad u oggolaan doontaa inay samada aado.
Kalsooni: ha ka laba labeynin wax badan. Isku day shay aad isleedahay wuu jeclaan karaa. Marka hore isku day. Haddii aad aragto jawaab wanaagsan, waad isku dayi kartaa wax badan. Tusaale ahaan, ibta naaska waa goob aad u xiiso badan dumarka, laakiin dadka qaar ayaa jecel in loola dhaqmo si naxariis leh qaarna waa kuwo xamaasad badan. Isku day inaad marka hore salaaxdo ibta naasaha. Hadday jawaabtu fiicantahay, waxaad isku dayi kartaa inaad noqoto qof dareen badan.
Beddel qaabkaaga: Iskuday qaabab kala duwan, adiga iyo iyadu waxay dooran karaan inay xakameeyaan waqtiga.
Khaladaadka marka dumarka la kiciyo
Sidii aan ku soo sheegnay bilowgii maqaalka, waxaa jira qaladaad badan oo caam ah oo la sameeyo markay tahay soo jeedinta haweeneyda. Aan aragno waxa ay yihiin:
Waqti ku filan kuma qaadin hordhaca.
Feejignaan la’aan nadaafadda shaqsiyeed iyo nigis. Udgoon wanaagsan waana muhiim inaad xirato nigis sax ah. Dabcan ma jiraan wax lagu xidho sharaabaadyo sariirta, taas oo yareyn doonta cudurrada haweeney kasta.
Ha ku mashquulin: Daawashada taleefanka intaad falka kujirto ama waxyaabo kale oo lagugu mashquuliyo ayaa hakad galin kara daqiiqada.
Diyaari kondhom: Iska ilaali inaad furto santuuqa oo aad kala tagto cinjirka kale. Haddii aad diyaarisay kondhomka, ka soo saar sanduuqa oo kala sooc, markaa ilbidhiqsiyadan yar ayaa ah wakhti muhiim ah oo aad badbaadin karto.
Ma jiro jawi xiiso leh: muusikada wanaagsan iyo iftiinka jilicsan ayaa waxyaabaha ka dhigaya kuwo xiiso badan.
Dhunkashada oo aad u qallafsan: Waa inaad si tartiib ah oo tartiib ah u dhunkataa, waxaa fiican inaad xoogga saarto dhammaan xoogaa dhunkasho badan intii aad siin lahayd tiro badan oo aad u xun.
Kintirka ma aha sida badhanka sixirka: Muhiim maahan in diiradda la saaro oo keliya aaggan, laakiin waxaa jira meelo kale oo haween ah oo u baahan fiiro gaar ah. Ha ku xadgudbin.
Tallaabada ugu horreysa ee lagu farxo haweenka ayaa ah ogaanshaha waxa iyaga ka farxiya. Guud ahaan, haweenku waxay u badan tahay inay ku baraarugaan maqalka maqalka iyo taabashada. Iyada oo tan laga duulayo, haweeneyda waxaa dhaqaajiya sheekooyinka shirqoolka, nuxurka shucuurta iyo faahfaahinta ciyaaraha qaawan, taas oo ka dhigeysa iyada inay dareento inay iyadu tahay halyeeyga riyadeeda Haddii tan aan ku darno dareenno kale, sida urta, dhadhanka iyo saamaynta muuqaalka wanaagsan, guusha waa la xaqiijinayaa.
Marka ay timaado tilmaamaha ama tabaha lagu kiciyo haweeneyda, waxa ugu muhiimsani waa wada xiriirka, ama si toos ah (uhadal) ama fiiro gaar ah u yeelo jawaabaheeda kicinta kala duwan iyo fahamka waxyaabaha ay doorbideyso. Waa inaan ogaanno markay naagta kacsantahay oo aan howsha si fiican u qabannay. Markaad ballanta ku jirto, waxaad la kulmi kartaa fal-celinno jir ahaaneed qaarkood xitaa haddii aan si fudud loo arki karin. Mararka qaarkood waa inaad aad u feejignaataa si aad u qabato. Aan aragno waxa calaamadahaasi yihiin:
Qoyaan ku dhaca xubinta taranka haweenka oo leh dheecaan xaydha.
Cirridka kintirka ayaa barara.
Guduudasho maqaarka (dheecaanka galmada).
Wax yar oo ku kordha cabirka naasaha.
Hyperventilation, heerka neefta oo kordhay.
ka dhalan kara xaddiga wadnaha.
Isbedelada dhaqankooda, falcelintooda, iyo faallooyinkooda sidoo kale waa la ogaan karaa. Marka la isku daro dhammaan tilmaamahan waxaan ogaan karnaa haddii haweeneydu raaxo leedahay ama aan raaxo lahayn.
Sida aad aragto, waxaa jira dhowr qodob oo muhiim ah oo maskaxda lagu hayo si loo barto sida dumarka loogu rogo si sax ah. Si kastaba ha noqotee, maskaxda ku hay inaan ku sii dari karno mid kasta oo ka mid ah dumarka aad la kulmi doonto. Sidaa darteed, waxaad diirada saartaa waxa shaqsi ahaan ugu ah tilmaame.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto sida haweeneydu u jeesan doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loo jeesto haweeneyda